हरेक दुई वर्षमा विश्वकप ? - Nepal Samaj
हरेक दुई वर्षमा विश्वकप ?
एजेन्सी । जहाँ उनीहरू भन्छन् त्यहाँ राम्रो कुरा पनि छ, अब यो स्पष्ट भयो कि फुटबलका प्रशासकहरुले फुटबल परिवर्तन गर्न सक्ने तरिकाहरू हेरिरहेका छन् । अन्तिम सम्भावित परिवर्तन फिफाले विश्वकप आयोजनाको वैधताको बारेमा अध्ययनलाई अनुमोदन गरेपछि आउँछ। चार वर्षमा भन्दा प्रत्येक दुई बर्षमा ।
राष्ट्रपति जियान्नी इन्फान्टिनो ७१ औं भर्चुअल फिफा सम्मेलनपछि प्रेसमा देखा परे र विश्वकपमा हुने सम्भावित परिवर्तनहरूको बारेमा कुरा गर्दै बोले ।
“यो फुटबललाई बढुवा दिने एउटा तरिका हो, हामीले फुटबललाई उकास्न के गर्न सक्दछौं भनेर अध्ययन गर्नै पर्छ र हाम्रो खुला दिमाग हुनुपर्दछ,” इन्फान्टिनोले भने ।
“हामीले यो अन्तराष्ट्रिय पात्रोमा कसरी फिट हुन सक्छ र कसरी छनोट खेलहरू आयोजना हुन सक्छन् भनेर हामीले हेर्न पर्छ । समर्थकहरुले महत्त्वपूर्ण खेलहरू र प्रतियोगिताहरु अझ बढी हेर्न चाहन्छन्, प्राथमिकता खेलकुदको हो र व्यावसायिक कुरा होइन ।”, इन्फान्टिनोले थपे ।
विडम्बनाको कुरा, इन्फान्टिनोले उही तर्क प्रयोग गरे, जुन १२ ठूला युरोपियन सुपर लिगका संस्थापक क्लबहरूले उनीहरूको आफ्नै परियोजनाको रक्षा गर्न गरेका थिए, र यो ध्यान दिनु पर्ने छ कि फिफाले जारी गरेको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार २०१४ मा ब्राजिलमा आयोजना भएको विश्वकपमा फिफाले ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर कमाएको थियो र २०१८ को विश्वकपमा बढेर लगभग ६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान द न्यु वोर्क टाइम्सले गरेको छ ।
अब केही साधारण गणितहरू गरेर हामी यो अनुमान लगाउन सक्छौं कि विश्वकप प्रत्येक दुई बर्षमा आयोजना हुने योजनाको अर्थ त्यहाँ एकै अवधिमा खेल्ने प्रतियोगिताको संख्या दोब्बर हुनेछ ।
फिफाले रूसी प्रतियोगितामा बनाएको ६ अर्ब अमेरिकी डलर कथित रूपमा विश्वकप दुई/दुई वर्षमा खेलाइएको खण्डमा आम्दानी दोब्बर हुने सम्भावना छ । तर माथि उल्लिखित अध्ययन सुरु गर्नु अघि फिफाले यो बुझेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने कुनै तरिका छैन ।